भाइको उपचारको लागि खर्च जुटाउन आफु भोकभोकै बसेकी दिदीको मृ’त्यु ! - Nepal Insider
भाइको उपचारको लागि खर्च जुटाउन आफु भोकभोकै बसेकी दिदीको मृ’त्यु !
January 15, 2020 447
काठमाडौं। भाइको उपचारको लागि खर्च जुटाउन आफैं भोकभोकै बसेर भाइलाई बचाउन प्रयासरत चिनियाँ युवतीले भाइलाई बचाउन त सकिन् तर आफैं कुपोषणका कारण मृ’त्युको शिकार भइन् । उनको गरिबी र भाइलाई बचाउन गरेको सं’घर्षको कथा संचारमाध्यममा आएपछि उनको सहयोगको लागि विश्वव्यापी रुपमा १ मिलियन युआन (१ करोड ६४ लाख नेपाली रुपैयाँ) संकलन भएको थियो । तर यो रकमले पनि उनलाई बचाउन सकेन ।स्थानीय समाचार साइट दपेपर डट सिएनलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेअनुसार वु हुयान चीनको गुइझोउ प्रान्तको गरिब परिवारमा १९९५ मा जन्मिएकी थिइन् ।
उनी ४ वर्षकी हुँदा उनकी आमाको मृ’त्यु भएको थियो । वु आफ्ना पिता र भाइँग बसेकी थिइन् । उनका भाइ वु जियाङलोङ मानसिक स्वास्थ्य स’मस्याले ग्र’स्त थिए र उनलाई नियमित रुपमा उपचार गराइरहनुपर्थ्यो । परिवारको अधिकांश कमाइ उनको अस्पतालको बिल तिर्दैमा सकिन्थ्यो ।६ वर्षअघि वु १८ वर्षकी हुँदा उनका पिताको पनि मृ’त्यु भयो । त्यसपछि यी दिदीभाइलाई सरकारको तर्फबाट मासिक ३०० युआन (लगभग ५ हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो । भाइको जिम्मेवारीका बीच वुले पढाइ छाड्नुपर्यो । यही बीचमा उनले एक व्यवसायिक कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाइन् ।
कलेजले उनलाई ७ हजार युआनको छात्रवृत्ति दिएको थियो । पिताको मृत्यु भएपछि यी दिदीभाइ काका–काकीको रं’रक्षकत्वमा बस्न थालेका थिए तर उनीहरुको पनि आर्थिक अवथा निकै नाजुक थियो ।भाइको उपचरको खर्च धान्नै नसक्ने स्थिति आएपछि अन्ततः वुले राम्रोसँग खानै छाडिन् । उनले एक दिनमा मात्रै २ युआनले काम चलाउँथिन् र खुर्सानीसँग भात खाएर गु’जारा गर्थिन् । उसको यस्तो खानपानले उनको शरीर कु’पोषित हुँदै गयो र अन्ततः गएको अक्टोबरमा उनलाई हिँड्न र सास फे’र्न स’मस्या हुन थाल्यो ।उनी स्थानीय अस्पतालमा गइन् जहाँ उनलाई मुटु र मृगौलामा ग’म्भीर स’मस्या भएको पत्ता लाग्यो ।
यी दुवै स’मस्या कु’पोषणका कारण भएको थियो ।उनीसँग आफ्नै उपचारको लागि पनि पैसा थिएन त्यसैले उनले च्यारिटीमा सहयोग गरिदिन अपिल गरिन् । विश्वभरका धेरै मिडियाहरुले उनको विषयमा समाचार छापे । त्यतिबेला उनको तौल मात्रै २२ किलो बाँकी थियो । उनको अपिलको समाचार विश्वभर फै’लिएपछि उनलाई सहयोग आउन थाल्यो र करिब १ मिलियन युआन सहयोग संकलन भयो । त्यतिबेला चोंगकिङ मर्निङ पोस्टलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा वुले आफू किन सहयोगका लागि मिडियामा गइन् भन्ने कुरा बताएकी थिइन् ।
‘मेरी हजुरआमा र बाबा उपचारका लागि आफूसँग पैसा नभएकै कारण म’र्नुपर्यो’ उनले अन्तरवार्तामा भनेकी थिइन् ‘म त्यो अनुभव गर्न चाहन्न । म गरिबीको कारण मृ’त्यु पर्खिन चाहन्न ।’ नोभेम्बरमा वुको स्वास्थ्य अवस्था झनै बि’ग्रियो र उनलाई प्रान्तको राजधानी गुइयांगको एक ठूलो अस्पतालमा रि’फर गरियो । तर, त्यहाँका डाक्टरहरुले पनि उनलाई ब’चाउन सकेनन् र सोमबार उनले २४ वर्षको उमेरमा मृ’त्युसँगको ल’डाइ हा’रिन् ।
Prevअन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन गल्छी गाउँपालिकाले निःशुल्क दियो वालुवा
Nextआज फेरी बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य ! हेर्नुस् कति पुग्यो ?
एसईईको पूर्वसन्ध्यामा अचानक स्थगित, अब कहिले लाइ सर्यो ?
कम्प्युटरमा कपी र पेस्ट पत्ता लगाउने टेज्लरको निधन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षाको नयाँ मिति तो’केको हो ?